Jubbaland oo warsaxaafadeed kasoo saartay arrimaha doorashooyinka dalka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Jubbaland oo warsaxaafadeed kasoo saartay arrimaha doorashooyinka dalka
Jubbaland oo warsaxaafadeed kasoo saartay arrimaha doorashooyinka dalka
War-saxaafadeedkan kasoo baxay Jubbaland ayaa marka hore waxaa lagu sheegay in Maamulka uu diyaar u yahay dalka ay ka qabsoonto doorasho waqtigeeda ku dhacda, kuna saleeysan hufnaan loona dhan yahay oo ah xor iyo xalaal.
Jubbaland ayaa dalbatay in gacanta Maamulka lagu soo celiyo Gobolka Gedo oo ay gacanta ku hayaan Ciidanka dowladda Federaalka ay kal horey halkaas ku daabushay, waxaana Maamulka uu sheegay in Ciidankaas yihiin Jabhad ka amar qaata Saraakiisha Nabadsugida dowladda Federaalka.
Waxaa kaloo Jubbaland caddeeysay in Gobolkaas aan lagu qaban karin Doorashada Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ilaa iyo inta laga saarayo Ciidanka markii horey halkaas lagu daadulay, kadibna gacanta loogu celiyo maamulka.
Ugu dambeyntii Jubbaland ayaa tilmaamay in marar badan kusoo cel-celisay War-saxaafadeedyo oo ay caddeyneyso in xad-gudubyo lagu haayo Gobolka Gedo ee ka tirsan Maamulkaas, isla markaana dowladda Federaalka geysay Ciidamo farabadan.
Maqaal horeSafiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay oo sheegay in ay hoos u dhacday awooda burcad badeeda
Maqaal XigaMadaxweynaha Somalia oo bogaadiyay dadaallada ay Xukuumaddu ku bixineyso dardargelinta arrimaha doorashooyinka Dalka